Cunnada iyo Cuntada - Vondt.net - Bogga 3 ee 16
Qeybta Kaydinta Cunnada: Cuntada iyo Cunnada
Ma xiisaynaysaa saamaynta cuntadu ku leedahay caafimaadkaaga? Halkan waxaad ka heli doontaa qodobbada ku jira qaybta cuntada iyo cuntada. Cuntada waxaan ku dari karnaa maadooyin loo adeegsado karinta caadiga ah, geedaha, dhirta dabiiciga ah, cabitaanka iyo suxuunta kale.
ARDAYDA: Walnuts-ka ayaa ka hortagi kara kansarka mindhicirka
08 / 07 / 2016 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, tayada Articles/av waxyeelladayda
Daraasad lagu daabacay joornaalka cilmi baarista ee Ka Hortagga Kansarka ayaa muujisay natiijooyin aad u xiiso badan sabab wanaagsan oo cusub oo ah in la cuno iniinno fara badan. Daraasadu waxay muujisay, markii ugu horeysay, in cunista cunnooyinka iniiniga ahi ay ka hortagi karaan kansarka mindhicirka oo ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan bakteeriyada ku jirta caloosha iyo xiidmaha. Tani waa war cajiib ah waligeedna horay looma soo bandhigin!
Kansarka mindhicirku waa nooc cudur dila ah oo kansar ah, marka loo eego tirooyinka ay soo saareen Ururka Kansarka, wuxuu ku dhacay 4129 qof sanadkii 2014. Tirooyinkan ayaa si joogto ah kor ugu kacaya iyagoo la xiriira nafaqada liidata iyo waxyaabaha kale ee khatarta ku ah kansarka.
- Daraasaddu waxay muujisay in iniinta lowsku ka hortagtay samaysanka kansarka mindhicirka
Daraasadu waxay siisay jiirka qiyaastii 10% qaadashada kalooriga maalinlaha ah ee loo yaqaan lowska. Tani waxay u dhigantaa qiyaastii dad faro ku tiris ah. Mid ka mid ah cilmi -baarayaasha daraasadda, Dr. Rosenberg, ayaa sheegay in "natiijooyinkayagu ay muujinayaan markii ugu horraysay in lawsku ka hortagi karo oo yarayn karo samayska kansarka mindhicirka". Waxa lagu arkay natiijooyinka ayaa ahaa in iniinta ay gacan ka geysato flora xiidmaha caafimaad qabta iyagoo u dhaqmaya sida probiotics (kor u qaada bakteeriyada wanaagsan) - tani waxay keentay in xiidmaha ay helaan difaac ka dhan ah sameynta kansarka.
- Walxaha waxaa ku jira maaddooyin dhowr ah oo caafimaadka kor u qaada
Dowsku wuxuu ka mid yahay miraha caafimaadka ugu badan ee qofku cuni karo. Waxay ka kooban yihiin heer sare oo ah fitamiin E antioxidant waxayna leeyihiin waxyaabaha ugu badan ee asiidhka dufanka badan leh ee ka mid ah lowska ugu badan ee aan ku cunno halkan Norway.
- Saamayn togan oo ka dhan ah cudurrada la xiriira hab nololeedka (kuwa kale macaanka!)
Walnuts waxay horey u muujiyeen inay saameyn wanaagsan ku yeelan karaan xanuunnada la xiriira qaab nololeedka sida cudurrada wadnaha iyo xididada, kaadi macaanka iyo xaaladaha neerfayaasha. Tani waa lowska intiisa badankeenu ku anfici doono ku darista cuntada maalinlaha ah.
War wanaagsan! Cilmi baaris aad u xiiso badan oo taageerta lowska waa inay qeyb ka noqdaan cuntada maalinlaha ah ee dadka badankood. Mustaqbalka, waxaan rajeyneynaa inay sidoo kale awoodi doonaan inay la sameeyaan daraasado caafimaad oo balaaran bini'aadamka si ay u bixiyaan macluumaad sax ah oo ku saabsan waxtarka. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka akhriso daraasadda markaa waad sameyn kartaa iyada.
QODOBKA KOOWAAD: - Daaweynta Alzheimer-ka cusubi waxay soo celisaa shaqadii xusuusta oo buuxda!
- Ma dooneysaa macluumaad dheeri ah ama waxaad qabtaa su'aalo? Weydiiso bixiyahayaga daryeelka caafimaad ee aqoonta u leh si toos ah (gebi ahaanba bilaash ah) annaga oo adeegsanaya annaga Facebook Page ama iyada oo loo marayo «Weydii - Hel Jawaab!"-qoraalka.
Nakanishi et al, 2016, Saamaynta isticmaalka walnut ee kujirta maskaxda iyo qaab dhismeedka bulshada ee microbial. Kansarka Prev Res (Phila). 2016 Meey 23. pac: canprevres.0026.2016. [Epub ka hor daabacaadda]
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Valnøtter.jpg?media=1648573622 499 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-08 17:09:532022-03-18 17:26:08ARDAYDA: Walnuts-ka ayaa ka hortagi kara kansarka mindhicirka
7 Calaamadaha Hore ee Sonkorowga Nooca 2
07 / 07 / 2016 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, Cudurada iyo Baadhitaanada/av waxyeelladayda
Halkan waxaa ah 7 calaamadood oo hore oo ah nooca sonkorowga 2 oo kuu oggolaanaya inaad ku aqoonsato xaaladda marxaladda hore oo aad hesho daaweynta saxda ah. Cilad-baarista hore waa mid aad muhiim u ah si loo awoodi karo in loo yareeyo horumarka sonkorowga isla markaana looga faa'iideysto daaweynta iyo isbeddelada cuntada. Midkoodna calaamadahan iskood ugama jeedaan inaad qabto nooca sonkorowga 2, laakiin haddii aad isku aragto astaamo badan, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto GP gaaga si aad ula tashato.
Ma haysaa wax fikrad ah? Xor baad u tahay inaad adeegsato sanduuqa faallada ama nala soo xiriir Facebook eller YouTube.
Kaadida oo soo noqnoqota
Marka jirku ogaado inuu jiro gulukoos saaid ah oo ku jirta dhiigga, oo ku dhacda nooca 2aad ee sonkorowga, waxay sababtaa kelyaha inay u dhaqaajiyaan gulukooskan kaadida - taas oo keeneysa soo saar badan oo kaadi ah. Taas macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad musqusha aado marar badan oo laga yaabee inaad xitaa dhowr jeer gasho habeenkii. Haddii aad ogaatay inaad booqashooyin badan ku timaado musqusha oo aad kaadi badan tahay marka hore ee aad musqusha gasho, markaa waxaan kugula talineynaa inaad tan kala hadasho dhakhtarkaaga guud.
Heerarka gulukooska ee sarreeya waxay u horseedaan qulqulka saameynta jirka. Sidaan soo sheegnay, sonkorta dhiiga ee sareeysa waxay kugu kalifaysaa inaad ka tagto biyaha marar badan sidaa darteedna aad lumiso dheecaan badan - taas oo iyaduna keenta dareen qallayl afka ah iyo inaad la kulanto inaad had iyo jeer u harraadsan tahay sidii aad ahaan jirtay.
3. Miisaan lumis aan la filayn
Markii lagaa helo cudurka sonkorowga nooca 2, unugyadaadu ma helaan gulukoos ku filan (shaqada oo insulin liidata darteed) - taasoo u horseedi karta miisaan lumis Tan oo ay weheliso kaadi joogta ah, taas oo calaamad u ah kaadi macaanka oo aan la xakamayn, waxay u horseedi kartaa luminta kalooriyada iyo dareeraha labadaba, taas oo iyana keenta miisaanka oo yaraada.
4. Gaajo! Gaajo! Gaajo!
Kuwa qaba nooca sonkorowga 2 waxay leeyihiin waxa loo yaqaan iska caabinta insulin. Tan macnaheedu waa in jirku uusan isticmaali karin insulin si uu gulukoos ugu soo galo unugyada. Caabintaas awgeed, unugyada muruqyada, unugyada dufanka ama unugyada kale si wanaagsan uma soo qaadan karaan gulukoosta. Jidhku sidaas ayuu isku dayaa inuu ku xalliyo xammeetida (Pancreas) isagoo bilaabaya inuu soo saaro xaddi badan oo insulin ah si uu u magdhabo nuugista gulukooska ee liidata - taas oo had iyo jeer macnaheedu yahay in dadka qaba nooca 2aad ee sonkorowga ay leeyihiin heerar insulin oo ka sarreeya kuwa kale . Waa heerkan insulin-ta sare ee markaa u diraya calaamadaha maskaxda inaad gaajaysan tahay.
5. Xanuun lugaha ah iyo xanuuno cagta ah (cudurka macaanka ee neerfaha)
Waqti ka dib, heerka sare ee sonkorta dhiigu waxay u horseedi kartaa dhaawac soo gaadha neerfaha jidhka ku xeeran - tan waxa loo yaqaan 'neuropathy' oo kaadi macaan leh. Qaarkood waxay noqon karaan kuwo aan astaan ​​lahayn, halka kuwa kale laga yaabo inay dareemaan kabuubyo, xoqid, xoqid iyo xanuun cagaha, lugaha iyo gacmaha. Caadi ahaan, cudurka macaanka ee cudurka macaanku wuxuu ka bilaabmaa cagaha wuxuuna ka shaqeeyaa xaggaas, astaamo ahaan wuu hadlaa. Xaaladda badanaa waxay ku dhacdaa kuwa uu ku dhacay nooca 2aad ee sonkorowga in ka badan 25 sano, laakiin sidoo kale waxay ku dhici kartaa kuwa qaba cudurka waqti ka gaaban kan.
Infekshannada joogtada ah
Sababta kuwa nooca 2aad ee sonkorowgu u badan yihiin ay u bukoodaan bakteeriyada iyo caabuqa khamiirka ayaa ah in sonkorta dhiiga ee sareysa ay bixiso xaaladahan aad u wanaagsan. Markaa, dadka uu ku dhacay nooca 2aad ee sonkorowgu waxay leeyihiin halis sare oo ah fungus cagaha, tusaale ahaan.
7. Calool, aragti aan kala go 'lahayn
Tani waa mid ka mid ah calaamadaha ugu horreeya ee laga yaabo inaad ku dhici karto nooca sonkorowga 2. Heerka sonkorta dhiigga oo sarreeya wuxuu beddelayaa awoodda muraayadaha si uu u beddelo qaabka - wax ay sameyso, tusaale ahaan, isbeddelada iftiinka. Marka xitaa haddii uusan muraayada waxyeello soo gaarin, muruqyada ku hareeraysan lens-ka waa inay si adag u shaqeeyaan si ay diiradda u saaraan Calaamaddan ayaa dhici karta marka ay isbeddelo degdeg ah ku yimaadaan heerarka sonkorta dhiigga.
Maxaad sameyn kartaa haddii aad qabto sonkorowga nooca 2?
- La shaqee GP-gaaga oo baro daraasad ku saabsan sida aad ugu caafimaadi karto caafimaadkaaga sida ugu macquulsan, tani waxay ku lug yeelan kartaa:
Gudbinta neerfayaasha ee baarista dareemeyaasha marka la eego baaritaanka suurtogalka ah ee neuropathy
Daaweynta dhakhtarka nafaqada
Haddii kale, xusuusnow in kahortaggu tahay daaweynta ugufiican.
PAGE xiga: - Daaweynta cusub ee loo yaqaan 'Alzheimer' waxay soo celin kartaa shaqadii xusuusta oo buuxda!
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan asxaabtaada, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan. Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah ama wixii la mid ah oo dokumeenti ahaan laguu soo diro, waan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waa iska caadi si aad noola soo xiriirto (gebi ahaanba bilaash ah).
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/diabetes-type-2.jpg?media=1648573622 420 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-07 08:38:332022-03-18 17:26:037 Calaamadaha Hore ee Sonkorowga Nooca 2
Bogga 3 ee 16<12345>»